တရားသော ငြိမ်းချမ်းမှု သာတူညီမျှမှုတွေနဲ့ နေ့သစ်များဆီသို့ ...
မာမာအေးရဲ့ အသည်းနာ ကမ္ဘာမကြေ
က အကောင်းဆုံးပါ။ ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီး Download လုပ်ပါ။..........................................
မြန်မာသတင်းတွေ ဖတ်ချင်ရင် ...
အခုတလောနအဖရဲ့ အမိန့်ကြေငြာချက် ၁/၂၀၀၈ နဲ့ ၂/၂၀၀၈ တို့ထွက်လာပြီးနောက်မှ တကမ္ဘာလုံး ပွက်ပွက်ညံအောင် အသံတွေကြားနေရတယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းကိုအတည်ပြုဖို့ ၂၀၀၈/မေလမှာလုပ်မဲ့ ကိစ္စအတွက်ဘဲပေါ့ခင်ဗျာ၊ အခုမှဒီကိစ္စကို ပြည်တွင်းကရော၊ ဗမာ့ဒီမိုကရေစီရေးကို ထောက်ခံကြပါတယ်ဆိုတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတော်တော်များများက ကန့်ကွက်ကြပါဆိုပြီး ပြောလာကြဒါကိုကျနော်နားမလည်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ဗိုလိသန်းရွှေ ကလည်း ယခု၆၃နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့မှာ အခုအတည်ပြုမဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတက်လာမဲ့ အစိုးရကို အာဏာအပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ သံယောင်လိုက်ပြီးဟစ်လိုက်ပြန်ပါတယ်၊ဒါလည်းတကယ်ဘဲလား?
အဟုတ်ကိုဘဲလား?လို့ မေးရမယ်ဆိုရင်တော့ အဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်၊ ဘုရား၊တရားနဲ့ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်း
တဲ့ဗိုလ်သန်းရွှေ ထုလိုက်တဲ့ ကြေးစည်ကထွက်လာတဲ့အသံလိုဘဲပေါ့ “မထင်-မထင်”ပေါ့ဗျာ။ ဒါကလည်းအကျိုး
အကြောင်းမရှိဘဲရမ်းသမ်းပြောနေဒါမဟုတ်ပါဘူး၊ အခုနအဖလို့ခေါ်တဲ့ အရင်နဝတ တုံးကလည်း ၁၉၉၀ရွေး
ကောက်ပွဲတုံးကလည်း အနိုင်ရတဲ့ပါတီကို အာဏာအပ်မယ်၊ ပြီးရင်စစ်တန်းလျားကိုပြန်ပါမယ်လို့ ဂတိတွေအ
ထပ်ထပ်အခါခါပေးပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုသန့်သန့်ရှင်းရှင်းအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ကျင်းပပေးခဲ့ဒါလည်း
ကမ္ဘာသိဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီတုံးက နဝတ ဒုတိယဥက္ကဌက ယခုနအဖဥက္ကဌတဖြစ်လဲ ဗိုလ်သန်းရွှေပါ။အရင်တုံးက
ရွေးကောက်ပွဲကိုတောင်မှ အသိအမှတ်မပြုတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေက အခုထပ်လုပ်ပေးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ကိုအသိအမှတ်
ပြုပါမယ်ဆိုဒါက “ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား?” ဆိုဒါကို ကျမ်းကိုင်ပြီးပြောရင်တောင်မှ “မယုံရေးချမယုံ”နိုင်ပါဘူးခင်ဗျား။
ဒါကလည်းအခုမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ၁၉၆၂-ဗိုလ်နေဝင်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက်၊ ပြည်သူတွေကိုအာဏာပြန်အပ်ဖို့အ
တွက် ၁၂နှစ်ကြာ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ကျမှ တွေ့တယ်၊ဒါကြောင့်၁၉၇၄ မှာအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရ တော်လှန်ရေး
ကောင်စီဥက္ကဌကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက နိုင်ငံတော်သမတကြီးဦးနေဝင်းကို မှန်ထောင်ကြည့်ပြီးတော့ ရာခိုင်
နုန်းပြည့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အာဏာကိုလွှဲ ပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာအရလည်း ကောင်း၊ဒါမှမဟုတ်
“အဖေကြီး”ရဲ့လမ်းစဉ်အရ နအဖဥက္ကဌ ဗိုလ်သန်းရွှေကနေပြီးတော့ နိုင်ငံတော်သမတဦးသန်းရွှေကိုအာဏာ
အပ်ဖို့သူတို့ရဲ့လမ်းပြမြေပုံကို ကုလသမဂ္ဂအထွထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အတန်တန်တောင်းပန်ပြောဆိုတဲ့ အား
လုံးပါဝင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုရေးဆွဲပါ ဆိုတာတောင်မှ လုံးဝလုံးဝ လက်မခံနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ဂမ်ဘာရီကို နအဖ
ကပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းဆိုလိုက်ပြီးပါပြီ။ဒီ့အပြင် စက်တင်ဘာသံဃာတော်များနဲ့ ကျောင်းသားပြည်သူတို့ရဲ့
ငြိမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့ဆန္ဒပြချီတက် လမ်းလျှောက်ပွဲကို စစ်တပ်ကအကြမ်းဘက်ပစ်ခတ်ချေမှုန်းပြီးစက ဒီမိုကရေ
စီကိုလိုလားသည့်ကမ္ဘာ့ပြည်သူလူထုကြီးအပါအဝင်၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အမျိုးသား
ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်အားလုံးပူးပေါင်းဖြေရှင်းရေး၊ နအဖနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံ့ပြီးဆွေးနွေး
ရေးစသည်တို့ကို တောင်းဆိုခဲ့မှုကို နအဖမှ ကြောက်ချင်ယောင်၊ဒုထ္တာယောင် ဆောင်၍ခေတ္တခဏမျှလိုက်လျော
ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးတဦးကိုလည်း ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ၄ကြိမ်လောက်ခပ်
တည်တည်ဆွေးနွေးပြခဲ့ပြီး ယခုဂမ်ဘာရီ ရဲ့ မတ်လနောက်ဆုံးခရီးစဉ်မှာပြောလိုက်ပါပြီ၊ခင်ဗျားတို့ ကုလသမဂ္ဂ
ကဘာပြောပြော ကျုပ်တို့နားမထောင်နိုင်ဘူး၊ ကျုပ်တို့ရဲ့လမ်းပြမြေပုံ အတိုင်းဘဲဆက်လုပ်မယ်၊ ဒါကြောင့်နအဖ
ကတော့စကားကုန်ပြောလိုက်ပါပြီ၊ အဲဒီတော့ကျနော်က ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်၊ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကိုတော့မေး
အဲဒီတော့ တာတေက သတင်းစာဆရာကြီး လူထုဦးစိန်ဝင်းရဲ့မကြာသေးခင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားတချို့ကို
ညွှန်းချင်ပါတယ်၊ “ကုလသမဂ္ဂကကယ်တင်လို့လွတ်မြောက်သွားကြတဲ့နိုင်ငံရယ်လို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာတနိုင်ငံမှမရှိ
ခဲ့ဖူးပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဒိုင်ယာလော့ခ်တို့၊ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆိုဒါတွေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အချိန်တွေဖြုန်းမနေ
ကြပါနဲ့။ တိုင်းပြည်ကလည်းနာလှပါပြီ။ ပြည်သူတွေလည်းဒုက္ခရောက်လှပါပြီ။ ”ဒုက္ခရောက်ဒါမှ တာတေ တို့ပြည်
သူတွေရဲ့အဆင့်က “ငရ်ဲကြီးရှစ်ထပ်”ရဲ့ အောက်ဆုံး အဆင့်ရဲ့အောက်မှာရောက်နေပါပြီ၊ဒီထက်လည်းအောက်
ကျစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်လည်းတာတေတို့ နိုင်ငံမှာ “သေမထူး-ဝါဒ”ထွန်းကားနေလာဒါမထူး
ဆန်းပေမဲ့စိတ်တော့မကောင်းစရာပါ။ ဟိုတလော တပေါင်းလပြည့်နေညက ရွှေတိဂုဏ်စေတီတော်ကြီးပေါ်မှာ
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မီးရှို့ပြီးဆန္ဒပြသွားဒါက အထင်အရှားပြသနေပါပြီ၊ ဒီ့အပြင်တာတတေတို့ရဲ့နိုင်ငံကလည်း
ရွှေနိုင်ငံကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုရွှေဗမာတွေကတော့ အခုတော့ မလေးကျွန်၊ ယိုဒယားကျွန်၊ စင်ကာပူကျွန်၊ဂျပန်ကျွန်၊
ဒူဘိုင်းကျွန်၊ ဆော်ဒီကျွန်စသည်စသည်ဖြင့် international slave အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွန်ဈေးကွက်ကြီးဖြစ်
နေပါပြီ၊ ဒီကြားထဲ မိမိနဲ့တကွမိသာစု အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေး အတွက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကို တရားမဝင်
သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေရသူများ တနည်းဆိုရရင်တော့ ကျွန်လိုင်စင်မရှိသူများဆိုရင်လည်း အဲဒီနိုင်ငံတွေက
အာဏာပိုင်တွေရော၊ အလုပ်ရှင်တွေရော မတရားဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခြင်းခံရတဲ့အပြင်၊ ကြိမ်ဒဏ်အပြစ်ပေးခြင်းကို
လည်းခံကြရပါတယ်၊ ဒီ့အပြင်ပိုသေးဆိုသလိုအလုပ်ရှင်တွေရဲ့ လူမဆန်စွာဆက်ဆံမှု၊မတရားစော်ကားခံရတဲ့
တာတေတို့ရဲ့ မြန်မာမိန်းခလေးများရဲ့ ဇတ်လမ်းတွေကလည်းပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်ဆိုသလိုပါဘဲ။
အဲဒါတွေအတွက်ကရော သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးက နအဖသံရုံးတွေကရောဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့သလဲလို့?
ဘာဆိုဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့ဒါကလည်း အထွေအထူးပြောစရာမလိုဘူးထင်တယ်ခင်ဗျာ့၊ သံရုံးတွေလုပ်ပေးဒါက
တော့ ဗိုလ်ချုပ်မိန်းမကြီး -ငယ်တွေ၊သားသမီးတွေ shopping လာရင် လိုက်ပြီး မျက်နှာလိုမျက်နှာရအလုပ်ဘဲ
လုပ်ပေးရဒါဘဲရှိတယ်၊ ကိုင်း ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ- ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အဖြစ်က ဘယ်လောက်
ရင်နာရသလဲဆိုဒါစဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာ၊ အခုတော့ရင်နာရုံတင်မကဘူး ရင်ရော၊ဖင်ရော၊တင်ရော တကိုယ်လုံး
ဝါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး လူထုဦးစိန်ဝင်းရဲ့ ပန်ကြားချက်မှာက…………….
“ဒီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီး အောက်မှာ ရာစုနှစ်ဝက်နီးပါးရှိခဲ့ပြီ။ အမြန်ဆုံးဒါတွေကိုအဆုံးသတ်သင့်ပြီ။ ဒီအာဏာ
ရှင်စနစ်ဆိုးကို Force out လုပ်နိုင်တဲ့ Force ကျနော်တို့ လက်ထဲမှာအသင့်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီForce ကပြည်သူ
ဆိုတဲ့ အင်အားပဲဖြစ်တယ်။ People Power ဆိုတဲ့ Force ထက်ကြီးမားတဲ့ Force ဘယ်မှာရှိမှာလဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ..
စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးက ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူတွေနဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ ဘာမထီ
တဲ့ သူရဲကောင်းစိတ်ဓါတ်ကိုပြခဲ့ပြီ။ ပြည်တွင်းမှာဖိနှိပ်မှုတွေ သိပ်ကြီးမားလို့ လူတွေကြောက်နေကြပြီ။ မထရဲ
တော့ဘူး၊မကြွရဲတော့ဘူး။ ဒိုင်ယာလောခ်နဲ့ အပေးအယူလုပ်ပြီး ပေးသမျှကို ယူကြစို့လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့
အာဏာရှင်ကိုမျက်နှာချိုသွေးပြီး ရာထူးရာခံတွေတောင်းခံချင်တဲ့ လူတွေရဲ့ အသံတွေ လုံးဝနုတ်ပိတ်သွားခဲ့ပြီ။”
“ရဲဘော်တို့ ဒီအချိန်ဟာ တော်လှန်ရေး တရပ်လုံး အလှည့်အပြောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်
ဖို့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကဖန်တီးပေးလိုက်ဒါ ဖြစ်တယ်။ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အရှိန်အ
ဟုန်ဟာ ကမ္ဘာတခုလုံး ကိုဖုံးလွှမ်းဥွားခဲ့တယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို မိမိရရ အသုံးချရမှာ။ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ သူရဲကောင်းစိတ်ဓါတ် ကိုယုံကြည်ကြ။ People Power နဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို ချေမှုန်း ပစ်ကြ။”
အဲဒီဆရာကြီး ဦးစိန်ဝင်း ရဲ့ ပန်ကြားချက်ကို တာတေ ကထပ်ဆင့်ထောက်ခံပြီးတော့ ရှင်းလိုပါသေးတယ်ဗျာ၊
တာတေတို့ တိုင်းပြည်မှာ ကမ္ဘာကအံ့သြ စံထားရတဲ့ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အံ့မခန်း
ရဲရဲတောက်သတ္တိကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာတကြိမ်၊ ယခု၂၀၀ရ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး မှာတကြိမ်
ကမ္ဘာကိုတုန်လှုပ်သွားအောင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ နောက်မျိုးဆက်လူငယ်တွေ သိကြဖို့အတွက် ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး
၁၉၈၈ခုနှစ်ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး၊ ၁၉၉၀ခုနှစ်လွတ်လပ်ပြီးသန့်ရှင်းမျှတဲ့၊ ယနေ့တိုင်စစ်အာဏာ
ရှင်တို့ကအတည်မပြုရဲသေးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ၊ ၂၀၀ရ ခုနှစ်ရဲ့ဘာမထီရဲရဲတောက် ငြိမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့ဆု
တောင်းတဲ့လမ်းလျှောက်ပွဲကြီး တို့က တသီးတခြားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်း
မှုတို့ကို ပြည်သူတို့ ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ အံတုခဲ့ကြတဲ့ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုမှုတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲ ကွင်းဆက်များဖြစ်ကြပါတယ်။
တာတေတို့ တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီ မရမချင်း ဒီထက်ဒီထက် ပိုမိုကြီးမားတဲ့ တိုက်ပွဲ များလည်းမုချမသွေ ဆင်နွှဲပြီး
တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်ဆိုဒါလည်း မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျား။ သတင်းစာဆရာကြီးဦးစိန်ဝင်းပြောသလိုပါ
ဘဲ တာတေတို့ပြည်သူရဲ့ အားထက်ကြီးတဲ့အား ဘယ်မှာရှိမလဲခင်ဗျား။ ၁၉၈၈ ရှစ်လေးလုံးကာလက ပြည်သူ
လူထုကြီးရဲ့ ညီညွတ်မှုကတော့ တကယ့်ကိုအံ့မခန်းလောက်တဲ့ညီညွတ်မှုကြီးပါ။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတဲ့
နို့စိုအရွယ်ခလေးက အစပြုလို့ သက်ကြားရွယ်အို အဘိုး၊အဖွားများအထိပေါ့ခင်ဗျာ။ တနိုင်ငံလုံး တောရောမြို့
ပါမကျန် တနည်းပြောရရင်တော့ “လှည်းနေ လှေအောင်း၊ မြင်းဇောင်းမကျန်” သပိတ်စခန်းတွေ နဲ့ “မဆလ အ
လိုမရှိ” “ဒီမိုကရေစီရရှိရေး -ဒို့အရေး” “နေဝင်းစစ်အစိုးရ -အလိုမရှိ” ဆိုတဲ့အသံတွေ ဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ
တဦးတယောက်က မှစည်းရုံး စရာမလိုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ တနံတလျား ပဲတင့် ရိုက်ခတ်ခဲ့ဒါ အားလုံးအသိပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရှိ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး၊ မော်လမြိုင်၊ထားဝယ်၊ စစ်တွေစတဲ့မြို့ကြီးများအပြင်၊ပြည်
ပဲခူး၊ ပခုက္ကူ၊ စစ်ကိုင်း၊မုံရွာ၊ လားရှိုး၊ သီပေါ၊ စတဲ့မြို့တွေအပြင်၊ မြို့ငယ်၊ မြို့သေး ရွာကြီး၊ရွာငယ်များမကျန်၊
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ မြောက်ဖျား ရှိ နောင်မွန်းမြို့မှစလို့ တောင်ဘက်စွန်းမြို့ဖြစ်တဲ့ ကော့သောင်မြို့အဆုံး၊ အရှေ့
ဘက်တာချီလိတ်မြို့ မှစလို့ အနာက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်အဆုံး၊ အထိ လူမျိုး၊ ဘာသာမခွဲခြားဘဲ စစ်အုပ်ရဲ့ဖိနှိပ်
မှုများကို ဆန့်ကျင့်ကြွေးကြော်လျက်၊ နေ့စဉ်ချီတက်နေတဲ့ လူထုကြီးကတော့ ပင်လယ်လှိုင်းလုံးကြီးများပမာ
လူ့လှိုင်းကြီးများကိုတွေ့နေရလိုပါဘဲ။ မျက်စိတဆုံးမက အဆုံးအစမရှိတွေ့ မြင်နေရတဲ့ လူထုကြီးရဲ့ ညီညွတ်မှု
ကတော့ ကြက်သီးမွှေးညှင်း ထလောက်အောင် တသားထဲဖြစ်နေပြီး၊ တကယ့်ကိုခိုင်မာကျစ်လစ်တဲ့၊ညီညွတ်မှု
စုစည်းမှုကို တွေ့မြင်ခံစားနေရပါတယ်၊ အဲဒါတွေကတော့ တကယ့်ကိုပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ အားPeople Power
ပါပဲ။ အဲဒီတုံးက ရဟန်းသံဃာတော်တွေကလည်း တပ်ဦးကနေ မားမားရပ်တည်ပါဝင်ခဲ့ လိုပဲ ကျောင်းများရဲ့
သမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ ကလည်းရှေ့တန်းကခွပ်ဒေါင်းအလံ မြင့်မြင့်မားမား လွှင့်ပြီးပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
လူထုလူတန်းစားအသီးက ဆရာဝန်များ၊သူနာပြုများ အနုပညာရှင်များ ၊ရှေ့နေများ၊ နောက်ပိုင်း ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့
ဝင်များ၊ လေတပ်မတော်မှ အရာရှိ အရာခံ စစ်သည်တော်များ၊ ယုတ်စွအဆုံး အလှဖန်တီးရှင်များပါမကျန် ပူး
ပေါင်းပါဝင်ဆန္ဒ ပြခဲ့ကြသလို၊ ခါးတစ်ခွင်ပေါ်မှ ခလေးများမကျန် ပြည်လုံးကျွတ် ပြည်သူတို့ရဲ့ တကယ်ဆန္ဒအစစ်
အမှန်ဖြစ်တဲ့ “စစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိ- ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ဒို့အရေး” အတွက်ညီညီ ညွတ်ညွတ်တိုက်ပွဲကြီးကို
ကြောက်လန့်ပြီး ဗိုလ်နေဝင်းအပါအဝင် သမတ သုံးယောက် ဆင်းပြေးခဲ့ ရဒါလည်း ပြည်သူ့အား People Force
အဲဒါကလည်း တနိုင်ငံလုံး ပြည်သူတို့ရဲ ညီညွတ်တဲ့အားကြောင့် စစ်အာဏာရှင်တို့ဘက်က ဘယ်လိုလုပ်
ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ပါ့မလဲဗျာ။ သင်္ချာ သဘောအရတွက်ပြပါရစေ။ အခု နအဖရဲ့အင်အားက ၄ သိန်းနီးပါးရှိတယ်ထား
အုံး၊ တကယ်တန်းရှိဒါကတော့ စားဝါးနေလို့ရတဲ့ တိုင်းမှူးတွေ အပါအဝင် နအဖ အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ချုပ်တွေဆိုဒါ ဆယ်
ဂဏန်းပါ၊ သူတို့နဲ့ အမြီးစားဘက် ခေါင်းစားဘက်တွေပါတွက်လိုက်ပါအုံး ၁၀၀၀ ထက်မပိုပါဘူး၊ တာတေတို့
ပြည်သူတွေမှာက သန်းငါးဆယ်ကျော်ရှိပါတယ်။ အချိုးချကြည့် မယ်ဆိုရင် ၁: ၅၀၀၀၀ ပါ ၊ နအဖဘက်က လူတ
ယောက်ကို ပြည်သူအယောက် ငါးသောင်းက ဝိုင်းရံထားနိုင်ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးအရေး တော်ပုံကြီး ကာလကလို
နိုင်ငံအနှံ အပြားတောရော မြို့ပါ စစ်အာဏာရှင်တို့ကိုဆန့်ကျင့်ဆန္ဒပြ ကြမယ်ဆိုရင် လက်တဆုတ်စာ စစ်အာ
ဏာရှင်တို့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ အကြမ်းဘက်နှိမ်နင်း နိုင်စွမ်း လုံးဝ စွမ်းဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါခင်ဗျား။ သေချာပါ
တယ်ခင်ဗျား လို့ထပ်လောင်း ပြောပါရစေ ခင်ဗျား။ တာတေပြာနေဒါက ၈၈၈၈ ကိုလွမ်းလို့၊အောက်မေ့လို့ပြော
နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၈၈၈၈ ရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကတာတေ တို့ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ လူတွေက အစဉ်အမြဲသတိရနေသလိုဘဲ
တရေးနိုးထပြောခိုင်းရင်တောင်မှ အသေးစိတ်ပြောနိုင် ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ကြမယ်ဆိုဒါ ကတော့အသေအချာပြော
နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒါကြောင့်လည်း ၈၈၈၈ ရဲ့ ပြည်သူတို့ရဲ့ ညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓါတ် ကိုယုံတယ်။ အခုလည်းပဲယုံ
တယ်။ ၈၈၈၈ရဲ့ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင့်ရေး က ၁၉၈၈ ခုနှစ်တင် အဆုံးသတ်သွားဒါမဟုတ်ပါဘူး၊ ၁၉၉၀ခုနှစ်
ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးတုံး ကလည်း စစ်အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ပါတီ ဖြစ်တဲ့ တ၊စ၊ည ပါတီကို အလဲထိုးလိုက်ပြီး ၊ဘယ်သူ
တဦးတယောက်ကမျှ စည်းရုံးစရာမလိုဘဲနှင့် ပြည်သူလူထု ကြီးတရပ်လုံးက လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် တကွ ဒီမိုကရေစီပါတီ များကို၎င်း တို့ရဲ့ အသဲကြားက
မဲတွေကိုပုံအော ပြီးပေးခဲ့ ကြဒါကလည်း စစ်အာဏာရှင် ကိုအလိုမရှိ တော့ကြောင်းဆက် လက်သက်သေပြလိုက်
ခြင်းတရပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ် တစု က အကြောက်တရား ကြီးမားစွာ နဲ့ဘဲ ၁၉၉၀
ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ယနေ့ ၁၈နှစ် ကြာသည့်တိုင် အောင် ရူးချင်ယောင်ဆောင် ပြီးမျက်ကွယ် ပြုထား
သည့်အပြင် ဘယ်ပြည်သူတဦး တယောက်ကမှ အသိအမှတ်မပြု သည့် “လမ်းပြမြေပုံ” ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်
ထုတ်ပြန်ပြီး ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေရော မြန်မာ့ပြည်သူတွေပါ ကလိန်ကကျစ် လုပ်နေဒါလည်း ကမ္ဘာသိ မြန်မာသိပါ
ခင်ဗျား။ ဘယ်စစ်ဗိုလ် တကောင်တမြီးကမှ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကို လုံးဝ လုံးဝ မဟရဲကြ ဒါကလည်း ပြည်သူ့
ဆန္ဒအစစ်အမှန် ကိုရင်မဆိုင်ရဲကြလို့ပါဗျာ။ အခုလည်း စစ်အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ဘာမှန်းမသိ ရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေ
ခံဥပဒေ ကို တတိုင်းပြည်လုံး ထောက်ခံခိုင်းနေ ပြန်ပေါ့၊ ကြားနေရဒါကတော့ နအဖစစ်ဗိုလ်တွေ ကလွဲလို့ ကျန်
ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးအပါအဝင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့ အစည်းအားလုံး၊ ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုကြီးတ
ရပ်လုံးက ဝိုင်းကန့်ကွက် နေကြဒါလည်းအားလုံး အသိပါဘဲ။ တချို့ မြို့နယ်တွေအတွင်း မှာဆိုရင် ကြားနေရဒါ
ကတော့ မှုတ်ဆေးတွေ နဲ့ “ကန့်ကွက်ကြ” “NO” ဆိုဒါတွေနဲ့ ရေးပြီး ကန့်ကွက်နေကြသလို NLD ရဲ့ကြေငြာ
ချက်ဖြစ်တဲ့ “မေလ ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူ ပွဲမှာ ကန့်ကွက်ကြ” ဆိုတဲ့အတိုင်း လူငယ်လူကြီး မကျန် လိုက်လံပြီး ရဲရဲ
ဝံ့ဝံ့စည်းရုံးဆောင်ရွက် နေဒါကိုလည်း ကြက်သီးထမခန်း ကြားနေရဒါတွေ က ပြည်သူလူထုရဲ့ အားFORCE တွေ
ပေါ့ခင်ဗျာ။ အခုလည်း နအဖ ကကြေငြာထားဒါဘဲ ခင်ဗျာ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲ ကိုနှောက်ယှက်
တဲ့ သူများကို ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်နဲ့ ဒဏ်ငွေ၁၀၀၀ကျပ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မယ်ဆိုဒါ ကလည်း ပြည်သူကို ခြိမ်းခြောက်
ထားဒါပါ ၊သူ့ရဲ့ ဥပဒေ အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင် NLD အလုပ်အမှုဆောင်တဖွဲ့ လုံးကို အရေးယူလိုက်ပေါ့၊တကယ်
တမ်းကျတော့လည်း မလုပ်ရဲပါဘူးခင်ဗျာ။ နောက်တချက်ကလည်း အခုကျင်းပမဲ့ ဆန္ဒ ခံယူပွဲ ကလည်း ပြောရရင်
တော့ သူတို့ရဲ့ လမ်းပြမြေပုံ မှာအချိန် ဇယားရှိ ပါတယ်ဆိုဒါကို ပြရုံ သက်သက်ဘဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နအဖကလည်း
ဆန္ဒခံယူပွဲ ကိုသူ့ဘက်ကတော့ အပိုင်တွက်ပြီး သားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ “ရှုံးရင်လည်း နိုင်မယ်၊ နိုင်ရင်လည်းနိုင်မယ်”
ဆိုတဲ့မူ နဲ့ ဒါကြောင့် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကဘယ်ဆီမှန်း မသိသေးပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကတော့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မှာလုပ်မယ်
အခုအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးက ကန့်ကွက်မဲ ထဲ့ကြဆိုဒါကို တော့ နအဖကို ဆန့်ကျင့်တဲ့ကိစ္စကကောင်း
ပါတယ်၊ ဆန့်ကျင့်ရမယ့် အဓိကရည်မှန်းချက် က စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင့်ရေး၊ နဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ကိုတနိုင်ငံ
လုံး၊ “လှည်း နေလှေအောင်း၊ မြင်းဇောင်းမကျန်” တညီတညွတ်တည်း တောင်းဆို တိုက်ပွဲ ဝင်ကြရမယ့် အချိန်အ
ခါဖြစ်ပါတယ်၊ တနည်းအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ “ဖောင်ဖျက်ပြီး တိုက်ရမယ့် နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ”ပါ။ ဒီတချီစစ်
အာဏာရှင်တို့ နိုင်သွားပြန်ရင်လည်း တာတေတို့ သားစဉ် မြေးဆက်၊မက တီ၊ကျွတ် တွေအထိစစ်ကျွန်တွေအ
ဖြစ် စစ်ဖိနပ်အောက် မှာ ပြားပြားဝပ် ရာစုနှစ် များစွာနေပေရော့ပေါဗျာ။ အကယ်၍ ဖွဲ့စည်းပုံ ဆန္ဒခံယူပွဲ မှာသူ
တို့ မနိုင်ခဲ့ပြန်ရင် လည်း အခုအချိန်အထိ ဘာလုပ်ပါမယ်လို့ နအဖ ကမပြောသေးပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ဒါကတော့မှန်း
ဆကြည့်ရဒါ “ကိုင်းဒါဆိုရင် နောက် ထပ်ဖွဲ့ စည်းပုံထပ်ဆွဲမယ်၊ အဲဒါအတွက်နောက်ထပ် ငါတို့၁၅နှစ်၊နှစ်၂၀
ဆက်ပြီးတော့ အုပ်ချုပ်မယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံမရှိသေးဘဲနဲ့ နောက်အစိုးရကို အာဏာ မလွှဲနိုင်ဘူး”။
ဒါကြောင့်မို့ အခု မေလ မှာ နွဲမယ့်ပွဲ က နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပါ (သရေမရှိတဲ့ပွဲ) ဒါကြောင့်မို့ တာတေတို့
ပြည်သူလူထု ကြီးတရပ်လုံး ကညီညီညွတ်ညွတ် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ စုစည်းညီညွတ်တဲ့အားUnited Force နဲ့
စစ်အာဏာရှင် ကို ကန့်ကွက် ဖြိုချရမဲ့ တိုက်ပွဲ ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကို လေးလေးနက်နက် နှလုံးသွင်းစေချင်ပါ
တယ်ခင်ဗျား။ မနေနိုင်လွန်းလို့ တခုလောက်တော့ ပြောပါရစေ၊ တချိန်က တနည်းပြောရရင် စစ်အာဏာမသိမ်း
ခင်က တာတေတို့ နိုင်ငံက အာရှမှာရော၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာရော၊ သဘာဝအရင်းအမြစ် တွေဖြစ်တဲ့ သယံဇာတပေါ
ကြွယ်ပြီး ပညာရေးမှာလည်း ကမ္ဘာကလေးစားလောက်ရတဲ့ ပညာတတ် တွေနဲ့ ထင်ရှားကျော်ကြား တဲ့ ရွှေနိုင်ငံ
ကြီးအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ ဖူးပါတယ်၊ အခုတော့…….. ရွှေနိုင်ငံတော်ကြီး တခုလုံးက စစ်အာဏာရှင် တို့ရဲ့ အတ္တအ
မှောင်ကြီးကြောင့် လည်းတနိုင်ငံ လုံးပိန်းပိန်းသား မှောင်နေပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တွေကတော့ လင်းလက်နေပြီး
ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုလ်တု တွေတလုံးပြီး တလုံးအာကာသထဲ ပစ်လွှတ်နေ ချိန်မှာ တာတေတို့ နိုင်ငံသားတွေက
တော့ ဘတ်(စ) ကားတမှတ် တိုင်၊နှစ်မှတ်တိုင်လောက် စီးနိုင် ဖို့အရေး ကတော်တော်လေး လုံးပမ်းနေရပါတယ်
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တွေမှာ နောက်ဆုံး ပေါ်ကားတွေနဲ့ တဝီးဝီး သွားနေချိန်မှာ ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်ကBus
ကားတွေ ခနော်ခနဲ့ နဲ့သွားနေရတယ်ခင်ဗျာ၊ သူများနိုင်ငံ တွေမှာ ခေတ်မှီ တဲ့ internet,website တွေနဲ့ပညာ
တွေသင်နေတဲ့ အချိန်မှာ တာတေတို့ ရဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက် ခလေးတွေ၇၀%ကတော့ မူလတန်းကျောင်းတောင်
မှမတက်နိုင်ပဲ ပလပ်စတစ်ကောက်၊ စားပွဲထိုးလုပ်၊ နဲ့ မိမိရဲ့ အသက်ရှင်နေ ထိုင်ရေး ကိုလုံးပမ်းနေရဒါကိုလည်း
နာကျဉ်းဖွယ်ရာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အလျှံပယ်စားသောက်နေချိန်မှာ တာတေတို့လူမျိုး
တွေ ထမင်းရည်တောင်မှ ခွဲတမ်းနဲ့သောက်နေကြရတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းအ
မျိုးမျိုးနဲ့ ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်နေချိန်မှာ တာတေတို့ပြည်သူတွေမှာ “ဖာတရာအဝတ်နဲ့ ”အရှက်လုံလောက်
ရုံပဲဝတ်နိုင်ကြတယ်၊ သူများနိုင်ငံတွေမှာ မိုးမျှော်တိုက်ကြီးတွေနဲ့ ခေတ်မှီ အဆောက်အဦးတွေနဲ့ နေထိုင်ကြတဲ့
အချိန်မှာ တာတေတို့ ပြည်သူတွေ ခုနှစ်ချောင်းမပြည့်တဲ့ကြမ်းနဲ့ ကြယ်မြင်၊လမြင် မကစကြာဝဠာ ကိုပါဒိုးယို
ပေါက်မြင်နိုင် တဲ့အမိုးအကာ နဲ့ နေကြရတာတွေကို အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကိုမေးချင်ဒါက “ဒါလားကွ မင်းတို့ပြောတဲ့ ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတော်သစ်ဆိုတာ”။
တာတေတို့ တိုင်းပြည် မှာအခုရော သဘာဝအရင်းအမြစ် နဲ့လူသား အရင်းအမြစ်တွေရော “ကုန်သွား”ပြီ
လားဆို သိကြတဲ့အတိုင်းပါဘဲ ဓာတ်ငွေ့တွေ၊ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ လူငယ်တွေလည်း တွေလည်းအပုံကြီးရှိသေး
တယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ထွက်သမျှသယံဇာတ တွေရောင်းလို့ရတဲ့ငွေ တွေကတော့ “တပ်မတော်”လို့ အမည်ခံဗန်းပြ
ထားတဲ့စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်သန်းရွှေ နဲ့ လက်တဆုတ်စာ စစ်ဗိုလ် တစုကလက်ဝါးကြီးအုပ် စားဝါးနေကြဒါလည်း
အားလုံးအသိအမြင်ပါဘဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ယခုအချိန်အခါ မှာ စစ်ကျွန် တွေရာသက်ပန် မဖြစ်ရေး အတွက် လည်း
ကောင်း၊ ကမ္ဘာ့ပြည်သူလူထုကြီး ကဲ့သို့ လူလိုစား၊ဝတ်၊နေထိုင်နိုင်ပြီး၊ လူ့အတွေး၊ လူ့အရေး ကို လွတ်လပ်စွာ
ရေးသား ၊ပြောဆိုနိုင်ရေး အတွက် သန်းငါးဆယ်ကျော် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုကြီး တရပ်လုံးက …………….
စစ်ကျွန်မခံ- ဒို့အားမာန် နဲ့ဆိုသလိုပဲ ညီညီညွတ်ညွတ် နဲ့ စစ်အာဏာရှင် ချုပ်ငြိမ်းရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်
မှတပါးအခြားမရှိ ဆိုတာကို တင်ပြလိုက်ရပါသည်ခင်ဗျား။
စစ်အာဏာရှင် -ကျဆုံးရေး ဒို့အရေး
ဒီမိုကရေစီရရှိ ရေး ……………ဒို့အရေး
ရေးသင့်တာရေးတဲ့ တာတေ at 12:04 AM0ယောက် အကြံပြုသွားတယ်
“ လူ ” ……… “ လူး” ခဲ့ရတဲ့
Ô ဦးနှောက်ပြည့်စုံ ရှိသော်ငြားလည်း
Ô လက်တွေဆယ်ချောင်း ပြည့်စုံပါလည်း
Ô ဖဝါးခိုင်ခိုင် ချနိုင်သော်လည်း
Ô နှုတ်ခမ်းလှုပ်ရှား ရွေ့နိုင်ငြားလည်း
Ô သဒ္ဒါကြည်လင် ထက်သန်ငြားလည်း
သွား၊ရွေ့…….ပြော၊ ဆို၊ ပေး
Ô စည်းလုံးညီညွတ် အားအင်စုလို့
ရ ရာကိုင်ဆွဲ၊ တိုက်ပွဲဝင်စို့
ရေးသင့်တာရေးတဲ့ တာတေ at 6:34 PM0ယောက် အကြံပြုသွားတယ်
ကတိတွေပေးထား တာလည်းလွန်နေပြီရှင့် အကို
တာတေတို့ နားထောင်ဘူးခဲ့တဲ့ ဒေါ်မာမာအေး ဆိုခဲ့တဲ့၊ တချိန်က တော်တော်လေးခေတ်စားခဲ့ တဲ့ သီချင်းတပုဒ်
ကိုစဉ်းစားမိရင်းကခေါင်းထဲမှာ အစီအရီပေါ်လာတဲ့အတွေးကိုဆန့်ရင်းကနေပြီးတော့“အင်း ဟုတ်တော့ဟုတ်သ
လိုဘဲလို့”တွေးမိတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒါကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း “ပဲခူးဆား”ဖြစ်တဲ့ မပါမပြီးတဲ့
ဗိုလ်နေဝင်း ကနေပြီးတော့ဘဲ စရမှာဘဲခင်ဗျား။တာတေတို့မှတ်မိသလောက်၊ သိသလောက် ၊တော့နောင် အနာ
တာတေတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရ ခဲ့တာ ၁၉၄၈ခုနှစ်က နေပြီး အခုသိပ်မကြာခင် ထိဆိုရင်နှစ်ပေါင်း ၆၀လောက်ရှိ
ပြီခင်ဗျာ့။ပြည်သူတွေရဲ့ အသဲကြားက မဲတပြားနဲ့ ပြည်သူတွေကရွေးချယ် တင်မြှောက်ခဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရတနည်း
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီအစိုးရ အုပ်ချုပ်ခဲ့ဖူးဒါကတော့၁၉၄၈ ကနေပြီး၁၉၅၈ ခုနှစ်အထိဆယ်
နှစ်၊နောက်၁၉၆၀ကနေပြီးတော့၁၉၆၂ ခုနှစ်အထိ နှစ်နှစ် စုစုပေါင်း(၁၂)နှစ်ပေါ့၊ ကျန်တဲ့ ၄၈နှစ်လုံးလုံးကတော့၊
အခုအချိန်အထိပေါ့ ၊ရာစုနှစ်ရဲ့ တဝက်နီးပါး ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ၊ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊နိုင်ငံတော်ရဲ့
မြေပေါ်မြေအောက်သယံဇာတတွေ၊ အားလုံးကိုသေနတ်ထောက်ပြီး စစ်ဓားပြတွေ အဓမ္မလုယူ၊သိမ်းပိုက်ခဲ့ဒါအခု
အချိန်အထိဖြစ်တယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေ အဆက်ဆက်က ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ ၊တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျတော့မဲ့
လက်တလုံးအလို၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပြိုကွဲမဲ့အရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးမဲ့အရေး
တွေအတွက် တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီး ဗိုလ်နေဝင်း၊ဗိုလ်စောမောင်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေအားလုံး ခပ်တည်
တည်ပြောပြီး၊ကမ္ဘာကိုရော၊မြန်မာတွေကိုရော “ဖိုးတွမ်တီး”လုပ်ခဲ့တာကြာပါပြီ၊ တနည်းပြောရရင်တော့ရိုက်စား
၁၉၅၈ခုနှစ် မှာ ဗိုလ်နေဝင်းက တပည့်ကျော်သုံးယောက်ကို အဲဒီတုံးကဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဆီကို လွှတ်ပြီးတော့အာ
ဏာလွှဲခိုင်းတယ်ခင်ဗျာ့၊ ပြီးတော့အဲဒီတုံးက ၁၉၄၇ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ၁၁၆ ကိုပြင်ခိုင်းပြီးတော့“အိမ်စောင့်
အစိုးရ”ဆိုပြီးတော့ ခပ်တည်တည်ဝန်ကြီးချုပ်နှစ်နှစ်လုပ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာ့၊ပြောရရင်တော့ ဇတ်လမ်းကအဲဒီကတည်း
ကတာတေတို့ရဲ့ “ရွှေနိုင်ငံကြီးမှသည် သူတောင်းစားခွက်ပျောက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဆီသို့”ဆိုတဲ့ဇတ်လမ်းကစခဲ့
တယ်လို့ဆိုရရင် ဘယ်တကောင်တမြီးမှငြင်းကြမယ်လို့မထင်ပါခင်ဗျား။အဲဒီကထဲကဗမာနိုင်ငံအတွက် “တက်
ကြော်ကြားအောင်မြင်ခဲ့တာ အခုအချိန်အထိဘဲပေါ့ခင်ဗျာ။ ဥပမာ ၁၉၆၀လောက်က ဘဲဥတလုံး ဆယ်ပြား(၁၀ါး)
အခုဘဲဥတလုံး၁၅၀ိ(တရာ့ငါးဆယ်ကျပ်)၊ဆန်တပြည် ပြားငါးဆယ် အခုအခုကျပ်တထောင်ကျော်၊လဘက်ရည်
တခွက် ၂၅ါး အခု၂၅၀ကျပ်၊ တိုင်းပြည်အတွက်လို့ဖင်ထောင်ပြီးအော်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုမေးချင်ပါတယ်
တိုင်းပြည်နဲလူမျိုး အတွက်ဘာတွေများလုပ်ပေးခဲ့သလဲဆိုရင်တော့ “မွဲဆေးကြီးဖေါ်ပေးခဲ့တယ်လို့”ဘဲဖြေမှာပါ။
၁၉၆၂ခုနှစ်ကစပြီးဗိုလ်နေဝင်း စစ်ဏာထူထောင်ကထဲက တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများအတွက်ဆိုပြီးတော့
ခပေါင်း၊အုန်းတော၊ဒူးယားစတဲ့ ဆွေနွေးပွဲကြီးတွေကို ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး တောင်သူလယ်သမား ဦးကြီးတို့ဘဝတိုး
တက်မြင့်မားရေးအတွက်ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်ပြောခဲ့သေးတယ်၊ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့လည်းတောင်သူလယ်သ
ဇူးတင်စွာနဲ့ ထောင်ချခဲ့ဒါကလည်း စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ကလိမ်ကကျစ်လုပ်ရပ်တခုပါဘဲ၊ ဒီလိုဘဲအပြောတမျိုးအ
တာတေတို့နောက်တမျိုးတော့ဖောက်သည်ချချင်သေးတယ်၊ ၁၉၆၃ခုနှစ် ဗိုလ်နေဝင်းက တောတွင်းမှ
ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ အပြသဘောနဲ့ခြောက်လလောက်လုပ်ပြခဲ့ပါသေးတယ်၊အဲဒီအချိန်တုံးက
လည်းပြည်သူလူထုကြီးတရပ် လုံးကပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်တက်တက်ကြွကြွလိုလိုလားလားထောက်
ခံအားပေးခဲ့ကြတယ်၊ပြီးတော့ မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တင်းမာမှု့ကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ပြားခဲ့တယ်လို့
လည်း တလိမ်ထဲလိမ်လိုက်ပြန်သေးတယ်ခင်ဗျာ့။ နောက်ထပ်အလိမ်တခု ကတော့ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအ
တွက်ကျိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ သခင်နု၊ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်း၊သခင်လေးမောင်၊သခင်စိုး၊ဝိဓူရ သခင်ချစ်မောင်၊စသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်တဲ့ ၃၃ ဦးအကြံပေး အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အကြံဥဏ်များပေးကြ
ပါဆိုပြီးဟန်ပြဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တယ်၊ဒါပေမဲ့ ဒီအဖွဲ့လည်းတနှစ်မကြာပါဘူး ဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ့၊အဲဒါက
လည်းတိုင်းပြည်အတွက် စစ်တပ်ကလွဲလို့ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ထပ်ဆင့်ပြီးတော့လိမ်ပြလိုက်ဒါပါဘဲ
အယောင်အဆောင်ပြခဲ့ ပါသေးတယ်၊ တကယ်တမ်းဗိုလ်နေဝင်းထူထောင်ခဲ့ ဒါကတော့ “စစ်တပ်နန်းစဉ်နန်းတက်
ဝါဒ”Military Dynasty ပါ။အဲဒီခေတ်က လူတွေပြောနေကြ တဲ့ စကားလေးတွေကို ပြောပြချင်လို့ပါ၊ အဲဒီတုံးက
တချို့က ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်က မှုကောင်းတယ်၊ လူမကောင်းလို့ပါတဲ့။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ၁၉၆၄ခုနှစ်က တာ
တေတို့ဆရာသမားတယောက် ပြောခဲ့ဘူးဒါကိုအခုစာဖတ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းရှင်း လင်းလင်းသိသွားမယ်လို့
ကဒီလိုပါ၊ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ “ဖာခေါင်းက ဘုရားတည်မဲ့ လို့ဆိုဒါ ဘယ်လိုမှမ
ယုံနိုင်ဘူး”တဲ့ခင်ဗျား။ဒါဆိုရင် တာတေတို့ရဲ့ နောက်မျိုးဆက်တွေလည်း လူကလိမ်တာလား၊မှုကလိမ်တာလား
စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့အလိမ်တွေကလည်း ယနေ့မျက်အခြေအနေအထိ “မပြီးသေးတဲ့ပန်းချီကားတချပ်”လိုဆက်
၍ဆက်၍လိမ်နေတုံးပါဘဲ၊၁၉၈၈ခုနှစ် “ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီး” ကျဆုံးခဲ့ပြီးနောက် စစ်အာဏာအမွေဆက်ခံ
ပါဘူး ဝန်ကြီးဌာနလေးငါးခုကို ဗိုလ်ချုပ်တဦးထဲက ကိုင်ထားဒါကိုကြည့်သိနိုင်ပါတယ်”လို့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်၊ဒါပေ
မဲ့အဲဒီကစလို့အခု အချိန်အထိ ပြုတ်ခဲ့၊တက်ခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးတွေကို တန်းစီခိုင်းရင်တောင် မိုင်တထောင်လောက်ရှည်
လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီအပြင် “ရွေးကောက်ပွဲကြီးပြီးရင် ကျနော်တို့စစ်တန်းလျား ကိုပြန်ပါ့မယ်”ကမ္ဘာသိ၊မြန်မာ
သိအကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပြောခဲ့သေးပါတယ်၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ပြီးလို့ ၁၉၉၂နှစ်အထိ ရူးကြောင်မှုးကြောင်
နဲ့အုပ်ချုပ်သွားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်စောမောင်ရော “ဘယ်မှာပြန်ခဲ့လို့လဲ”။ဒါတွေကတော့စစ်အာဏာရှင် တို့ရဲ့ formula
လိမ်ကွက်တွေပါဘဲ၊အဲဒီတုံးက နဝတဒုဥက္ကဌက အခုနအဖ ဥက္ကဌတဖြစ်လဲဗိုလ်သန်းရွှေပါ၊ အခုနအဖ ဒုဥက္ကဌ
ဗိုလ်မောင်အေး က နဝတအဖွဲ့ဝင်တဦးပါ၊သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲကြီး မှာဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြမယ်
ဆိုဒါလည်းငြင်းဆိုဖွယ်ရာမရှိပါ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကလည်းတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဆိုဒါကလည်း
နအဖအဖွဲ့ဝင်တွေရော၊ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးက အသိအမှတ် ပြုကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ကအသိ
အမှတ်မပြုနိုင်တာကို တာတေက ပြည်သူတွေကိုယ်စားနဲနဲလေးမေးချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ့၊ “အတိတ်မေ့ရောဂါများစွဲ
ကပ်နေလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေဒါလား၊ ဒါမှမဟုတ် formula အတိုင်းလိမ်နေဒါလား၊လို့အစ
ပြီးတော့ ဗိုလ်စောမောင်ကို အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ နောက်ပိုင်း နှစ်စဉ်နှစ် နအဖက တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးကဖြင့်
၁၀% တချို့နှစ်တွေဆိုရင် ၁၃% အထိတိုးတက်နေပါတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာ ခဲ့သေးတယ်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က
တောင်အံ့ဘနန်းဖြစ်အောင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ခဲ့ပါတယ် ဆိုတဲ့ တာတေတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကတော့
ထမင်းရည်တောင် ခွဲတမ်းနဲ့သောက်နေရတယ်ခင်ဗျာ့၊ နောက်တာတေတို့ လူမျိုးအများစု ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ
ဖြစ်ကြပါတယ်၊တာတေတို့တိုင်းပြည်မှာ ရှေးအစဉ်အဆက် ဘိုးဘွားများလက်ထက်က ဆိုရိုးစကား တခုရှိခဲ့ဘူးပါ
ပါဘူး၊နောက်ဆုံး တာတေတို့ မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် လှူဒါန်းခဲ့ ကြတဲ့ သံဃာတော် များရဲ့သပိတ်တောင်
မှ “ဘာမှမရှိ နတ္တိ” ဖြစ်နေတာ ကြာနေခဲ့ရပါပြီခင်ဗျား။ အဲဒါကြောင့် နအဖ တွေပြောနေတဲ့ “စီးပွားရေးတိုးတက်
နေတယ်ဆိုတာ ဂျိုနဲ့လား”လို့ထပ်ဆင့်လို့မေးချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျား။ဒါကလည်း formula ဘဲထင်ပါရဲ့ခင်ဗျား
တာတေတို့ကတော့ ထင်ပါတယ်၊ နအဖပြော တဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်တယ်ဆိုဒါ၊ ဗိုလ်ချုပ်တစုနဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်
ဝေခံလက်တဆုတ်စာ လူတစုဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့သားသမီးတွေရဲ့နေ့
စဉ်နိုင်ငံခြား မှာshopping ထွက်နိုင်ကြ လို့ပါဘဲ၊ စစ်တိုင်းမှူးတွေရဲ့ သားသမီးတွေ ဆိုရင်လည်းရန်ကုန်မြို့အကြီး
ဆုံးဟိုတယ်ဖြစ်တဲ့ Trader's Hotel မှာတညကို ၆သောင်း ၇သောင်းလောက်ပေးရတဲ့ အခန်းတွေကိုနှစ်လုံးပေါက်
ဌားထားကြဒါလည်း သူတို့ စစ်အုပ်စု အတွင်းမှာလည်း style တခုပေါ့ ဗျာ။အဲတာတွေကြောင့် လည်းတာတေတို့
ဗိုလ်ချုပ်တွေက တိုင်းပြည်စီးပွါးရေး တိုးတက်နေတယ်လို့ ပြောသလားတော့ မသိဘူးခင်ဗျာ့၊ ပြည်သူလူထုကြီး
ကတော့ “ဖွတ်”ကတောင် အဘလို့ခေါ်ရမဲ့ မွဲကိန်းဆိုက်နေပြီခင်ဗျာ့။ ပြီးတော့ သူတို့ကပြောရဲသေးတယ်လေ။
“ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ စည်းကမ်းရှိသော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ်ကြီး ဆီသို့”တဲ့ဗျာ၊ သူတို့မို့ဘဲပြောရဲကြ
တယ်နော်၊တာတေ တို့ ဟိုအရင်ငယ်ငယ်တုံးက ကြားဘူးဆိုဘူးတဲ့ သီချင်းထဲက လိုဘဲ “လိမ်တယ်ညာတယ်
လူညာကြီးရယ်”လို့သာကမ္ဘာတင် မဟုတ်ဘူး၊စကြာဝဋ္ဋာအနန္တကြားအောင် ဟစ်လို့သာအော်လိုက်ချင်တယ်ဗျာ၊
နောက်ပြီးတဖန်………. ပြောပြချင်သေးတယ်ခင်ဗျာ့။၁၉၉၀ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကြီးတုံးကရော၊အဲဒီ
မတိုင်ခင်ကရော၊ ပြီးတော့ရော သူတို့ပြောတဲ့ အပိုဒ် ၆ ဆိုဒါ ဗိုလ်စောမောင်လည်းမပြောဖူးဘူး၊ ဗိုလ်ခင်ညွန့်လဲ
မဆိုဖူးဘူး၊ ဗိုလ်သန်းရွှေ ကိုယ်တိုင်လည်း ယောင်လို့တောင်မှ မဟခဲ့ဖူးပါဘူးဗျာ၊ဘာအခုမှ အပိုဒ်၆တွေ ၇တွေ
လာပြီးပြောနေကြတာကိုလည်း တာတေတို့ နားမလယ်ပါဘူးဗျာ၊ ယောင်္ကျားပီသပါတယ် ဆိုတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေဘဲ
ဗျာ၊ အစကထဲကယေင်္ကျားပီပီ ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်၊မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုပြောရဲရမယ်ခင်ဗျ၊ အခုတော့
လည်းကလိမ်ကကျစ် ဥဏ်နဲ့ အခုဆီထမင်းကြော်၊ အခုစာကလေးကြော် အမျိုးမျိုးဘဲ တတ်လည်းတတ်နိုင်ကြတဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ရင့်မာကြီးတွေရယ် လို့သာဟစ်ရအုံးမယ်ခင်ဗျ။ နောက်သူတို့ကပြောသေးတယ်၊ ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်
လို့ ပြင်စရာရှိဒါတွေကိုလည်းပြောကြပါတဲ့ ခင်ဗျ၊ ဒါပေမဲ့နောက် တခါကျတော့ ဘာမှပြောဖို့ ပြင်ဖို့ မလိုတော့ပါ
ဘူးတဲ့၊ ကိုင်းဘယ့်နှယ်ရှိစ ပရိသတ်အပေါင်းတို့ ခင်ဗျား။
နောက်ထပ်….နောက်ထပ်ပရိသတ်တို့ သိကြတဲ့အတိုင်းပါဘဲ တာတေရဲ့ အမြင်ကိုတော့ ထပ်ပြီးတော့ပြောရအုံး
မယ်ခင်ဗျာ့၊အရင်ရှေး ပဝေသဏီက ဟာတွေကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး၊ နီးနီးကပ်ကပ်လေးတွေကိုဘဲပြောပြပါရ
စေ၊ အရင်ဧရာဝတီ မြစ်ကြီးကို စုံပြီးတော့ ကျောက်တော်ကြီး ဘုရားကို ခမ်းခမ်းနားနားကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်စည်
စည်ကားကား သဒ္ဒါမြတ်နိုး လက်စုံမိုးပြီး၎င်း၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ ရောင်ဝါနေလို ထွန်းလင်းစေ သော်၊ စသည်စသည်ဖြင့်
ကြွေးကြော်ပြီး၎င်း၊ မင်းပေါင်းစုံညီစွာနဲ့ ဘဲကျောက်တော်ကြီး ဘုရားကို အာရုံ သစ်သီးဆွမ်းကပ်ပြခြင်းဖြင့်၎င်း၊
ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ စစ်ဗိုလ် အပေါင်းပါ တစုက ပြည်သူလူထုကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ဘုရား၊တရားကို ကြည်ညိုဟန်၊
သွားလေသူ သူ့ကိုယ်သူ သောတာပန် လို့ထင်နေတဲ့ ဗိုလ်စောမောင်ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့အနာဂါမ်များလို့တောင်
ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်ပြခဲ့ကြဒါလည်း တာတေတို့ပရိသတ်ကြီး အမြင်အသိပါခင်ဗျား။
နောက်ပြီးတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေ နဲ့မိသားစုကလည်း တောင်ဒဂုံ မှာပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်ကြီးတခုကိုလည်း ကြား
ရတဲ့လူအပေါင်း သာဓုအကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ပြီးကြည်ညို သွားရအောင် ခပ်တည်တည်နဲ့လှူဒါန်းသမှုပြုပြလိုက်ပါသေး
တယ်၊အခုတော့ ကမ္ဘာ့သာသနာသမိုင်းမှာ စံချိန်တင်ရလောက် အောင် ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများ ပြည်သူအများကို အကြမ်းတမ်းဆုံး၊ အရိုင်းစိုင်းဆုံး၊ အယုတ်မာဆုံး၊အဆိုးရွားဆုံးပစ်ခတ်၊ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့ဒါက
တော့စံချိန်တင်လောက်ပါပေတယ် ခင်ဗျား။ ပြီးတော့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မုသာဝါဒဆေးလုံးကြီး ကိုမျိုပြီးတော့ ရဟန်း
တော်တပါးမှ ပျံလွန်တော်မှုခြင်း မရှိပါဘူး လို့လည်းဗြောင်လိမ် ဗြောင်စား လိမ်လိုက်သေးတယ်ခင်ဗျား၊ ဒီအပြင်ပို
သေး ရဟန်းတုတွေ ပါလို့ပြောပြီးတော့ နအဖရဲ့ စွမ်းအားရှင်ဘုန်းကြီးကျောင်း တွေကလွဲပြီး ကျန်ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းတိုက်များ ကိုညအချိန်မတော် ဝင်ပြီးစီး၊ သံဃာတော်များပိုင်ပစ္စည်း များကိုလုယက်၊ သံဃာတော်များကို
ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး၊ အဓမ္မလူဝတ်လဲ၊ ပုဒ်ထီးပုဒ်မတွေ အတင်းတတ်၊ပြီးတော့ထောင်ချ၊ အခုအချိန်အထိလည်းလိုက်
လံဖမ်းဆီးနေစဲ ကိုတာတေက မေးခွန်းလေးတခုတော့မေးချင်ပါတယ်၊“ပရိသတ်တို့ရေ ကိုင်းဘာလုပ်ကြမလဲလို့”
မပြီးသေးပါဘူးခင်ဗျာ့………..ဆက်ပြီးတော့ဘဲ တင်ပြပြီးတော့တာတေရဲ့ ပရိသတ်ကြီးဆီက အကြံလေးလည်း
တောင်းခံပါရစေ ခင်ဗျား။ အခုစက်တင်ဘာ “ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး”ကြီးပြီးတော့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး
ကောင်စီရဲ့ ကြေငြာချက်ကြောင့်၎င်း၊ ကမ္ဘာ့ပြည်သူလူထုကြီးက ရွှေဝါရောင်တော်ရေးကြီးကိုအင်တိုက်အား
တိုက်ထောက်ခံအားပေး မှုကြောင့် နအဖဗိုလ်ချုပ်များက “ကြောက်ချင်ယောင်၊ဒုထ္ထာယောင်ဆောင်ပြီး”တော့
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမယ်ခင်ဗျာ့၊နောက်လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့လည်း
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါ မယ်လို့ ကြေငြာချက်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးတွေဘာတွေ ခန့်ပြီး၊ခပ်တည်တည်လုပ်
ပြတော့လည်း ဟုတ်သလိုလိုထင်ရသား ခင်ဗျာ့၊ အခုတော့ကော “စာမလာသတင်းမကြားရသည်မှာကြာပြီဖြစ်
ပါ၍” ဆိုသလိုဖြစ်နေပါတယ်၊ အခုဒီဇင်ဘာလဆန်း လောက်ကထင်ပါရဲ့ နအဖရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ
ဗိုလ်ကျော်ဆန်းက ပြောလိုက်ပါပြီ၊ သူတို့ရဲ့ လမ်းပြမြေပုံ အတိုင်းဘဲသွားမယ်၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်
မှပါစရာမလိုတော့ဘူး လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ကမ္ဘာသိကြေငြာလိုက်ပါပြီ ခင်ဗျား။ပရိတ်သတ်
တို့ရေအရင်က စစ်ဗိုလ်တွေ ဂတိစကားတွေကိုတော့ မကိုးကားတော့ပါဘူး၊လတ်တလော ပူပူနွေးနွေး လွန်ခဲ့တဲ့
နှစ်လလောက်က နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ ဂတိတွေ၊ စကားတွေက ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ၊“သဲထဲရေသွန်သလို”
ဖြစ်သွားပြီလား? ရာစုနှစ်ဝက်နီးပါး ထူထောင်လာတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စံနစ် ကိုထောင်စုနှစ်တိုင်အောင်ဆက်လက်
ခွင့်ပြုဖို့ကို ကပ်ကြီးသုံးပါးဆိုက်နေတဲ့၊စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ တာတေတို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကြီးတရပ်
လုံးက ထောက်ခံနိုင်ပါသလား?လက်နက်မဲ့ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးရဲ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုများက ဒီမိုကရေစီ
ရေးတိုက်ပွဲကြီး အောင်မြင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသလား? ဒါမှမဟုတ် ဗိုလ်နေဝင်း ၁၉၆၂နှစ်တုံးကပြောသလိုဘဲ
“ဒုတ်-ဒုတ်ချင်း၊ဓါး-ဓါးချင်း”ဆိုသလိုဘဲ “သေနတ်-သေနတ်ချင်း”ဆိုရင်ရော တာတေတို့ပြည်သူတွေတောင်းနေ
တဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကြီး(ဓမ္မတိုက်ပွဲကြီး) အောင်မြင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား?
အဲဒီလို “လား”ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ တာတေရဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို တမေးထဲမေးမိဒါကိုတော့ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျား။
ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ တာတေလည်းတာတေရဲ့ ဆန္ဒရှိသလို ၊တာတေရဲ့ ဘော်ဒါတွေမှာလည်း ဆန္ဒအမျိုးမျိုး
ရှိကြမှာပါ။အဲဒီတော့ အခုတင်ပြလိုက်တဲ့ စာရဲ့နောက်ဆက်တွဲကို တာတေလည်းဆက်ပြီးတော့ရေးရမှာပါ၊ဒါပေ
မဲ့ နိုင်ငံအသီးသီး၊အလွှာအသီးသီး မှာရှိနေကြတဲ့ ဆန္ဒအသီးကိုလည်းသိချင်တဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြစွာနဲ့မေးရခြင်းဖြစ်ပါ
တယ်၊ဒီတော့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒအသီးသီးကို တကြောင်းထဲ၊ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း စာတပိုဒ်ဖြစ်ဖြစ် တာတေ
တို့ရဲ့ ပြည်တွင်းပြသနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ ဆိုတဲ့ အကြံဥဏ်တွေကို သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား၊ပြီးတော့
တာတေတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရ မယ်လို့ရာနုန်းပြည့်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျား။
တာတေရဲ့blog ထဲမှာလည်းရေးပေးနိုင်သလို, တာတေရဲ့ emailကတော့ tartay47@gmail.com
ရေးသင့်တာရေးတဲ့ တာတေ at 6:31 PM0ယောက် အကြံပြုသွားတယ်
ရေးသင့်တာရေးတဲ့ တာတေ at 6:47 AM 1 ယောက် အကြံပြုသွားတယ်
ရှိခြင်း - မရှိခြင်း
Ð ရှင်ဘုရားက ဟောကြားခဲ့တယ်
ဗိုလ်သန်းရွှေက ပြောပြန်တယ် “ငါဟာ အတ္တဟဲ့”လို့
ကမ္ဘာပသင်္ချေ ငါသုံးနိုင်တယ် “ဘာအနတ္တလဲ”
“Life is nothing” တဲ့
ဗိုလ်မောင်အေးကပြောတယ် “ဘာ nothing လဲ”
သုံးမကုန်အောင် အားလုံးရှိတယ်…“ ငါက something ပဲ”
Ð ရှေးလူကြီးတွေ မိန့်မှာခဲ့တယ်
ဗိုလ်ရွှေမန်းက တုံ့ပြန်ခဲ့တယ် “ဘာရုန်းတာလဲ”
လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အာလုံးရှိတယ် “ငါကအေးဆေးပဲ”
“မေတ္တာ သစ္စာ ဂရုဏာ မုဒိတာ တဲ့”
ဗိုလ်စိုးဝင်းက ပြောပြပြန်တယ် ……မေတ္တာမလိုဘူး ငါသတ်ရဲတယ်
Ð ရွှေပြည်သာက လူကပြောတယ်
Ð လှိုင်သာယာက လူပြောတယ်
Ð တောင်ဒဂုံက လူကပြောတယ်
Ð တပြည်လုံးက ပြောကြတယ်
မှတ်ချက်။ ။ ဒီခံစားမှုက မနှစ်က ခံစားခဲ့ဒါပါ၊ အခုတော့ ဗိုလ်စိုးဝင်းတယောက် ယောယုဝမှာ ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့အမှုတွဲနေလို့ စာဖတ်သူတို့က မိမိကြိုက်ရာကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ရေးသင့်တာရေးတဲ့ တာတေ at 6:45 AM0ယောက် အကြံပြုသွားတယ်
လူတဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အများနဲ့ဖြစ်စေ “အကြောက်တရား”ဆိုဒါကတော့ ထိုက်သင့်အား လျော်စွာ အနည်းနဲ့အများတော့ရှိကြစမြဲပါ။ အခြေအနေအရ လူတယောက်ချင်းအတွက် မိမိရင်ဆိုင်ရသောအတွေ့ အကြုံအရ အကြောက်တရားက ကွဲပြားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ့။ အဲဒီလိုအခါ မျိုးကျတော့လည်း လူတဦးချင်းစီရဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အကြောက်တရားအနည်းအများ၊ ဆိုသလိုဘဲကွာ ခြားမှုကတော့ ရှိမှာပါ။ သို့သော် အဓိကအားဖြင့်ဆိုရမယ် ဆိုရင်တော့ အကြောက်တရားလွှမ်းမိုး ခံရသူအများစုမှာ လူ့ဗာလများ၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်နဲပါးသူများ၊ လူ့သဘာဝကို မသိနားမလည် ဆင်ခြင်တုန်တရားမရှိသူများ၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ ကြည့်တတ်ကြပြီး ဘယ်သူသေသေ၊ ငတေမာရင် ပြီးရောဆိုတဲ့ အတ္တကြီးမားသည့်လူတန်းစားများ၊ “ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း” ဆိုတဲ့ တောတွင်းတိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့ ဥပဒေသတိုင်း စာနာထောက်ထား ညှာတာမှုမရှိဘဲ အာဏာလက်နက်တို့ဖြင့် ရိုင်းပြစွာအနိုင်
အကြောက်တရားနဲ့ အမှန်တရားကတော့ လုံးလုံးလျားလျား ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ဆန့်ကျင်
ဘက်တရားနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကြောက်တရားကြီးမားလေ အမှန်တရားပျောက်ကွယ်လေ၊ မသိမှုဆိုတဲ့ မောဟတရားကြီးစိုးလေဖြစ်ပြီး၊ အကြောက်တရားနဲပါးလေ အမှန်တရားကိုပို၍ ပို၍ သိမြင်လေဖြစ်ပြီး လောကအကျိုး၊ တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကို မိမိရဲ့အတ္တကျိုးကို ပိုပြီးစွန့်လွှတ်နိုင်လေ ဆိုဒါတွေက လောကနိယာမပါခင်ဗျာ။
တာတေတို့ရဲ့ နိုင်ငံမှာ ၁၉၆၂ခုနှစ် ကစပြီး ကနေ့၂၀၀၇ အထိ စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းပြီး ပြည်သူ့အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ဒါ ၄၅နှစ်ကျော်လို့ရာစုနှစ်ဝက် တိုင်ခဲ့ပါပြီ၊ ဗိုလ်နေ၀င်း (စစ်အာဏာကိုစတင် တည်ထောင်သူ) လက်ထက်ကလည်း ပြည်သူတို့ တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရဆီက မတရားအာဏာသိမ်းပြီးနောက်၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကို မတရားသိမ်းယူပြီး ၎င်းနဲ့စစ်ဗိုလ်အပေါင်းပါတစု ဇိမ်ခံရေး၊ ဆွေမျိုးတစု ကြီးပွားချမ်းသာရေးကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။
ဗိုလ်နေ၀င်း England မှာမြင်းပြိုင်ပွဲ၊ ခွေးပြိုင်ပွဲတွေသွားပြီး ဒေါ်လာသန်းချီပြီးလောင်း ကစားနေချိန်မှာ ပြည်သူတွေထမင်းငတ်လို့ သေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေကို ဖြေရှင်းပေးဘို့ အမှန်တရားအတွက် တောင်းဆိုကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို ဆုလတ်အဖြစ်၊ အဲဒီအချိန်အခါကလူမသိသူမသိ ထောင်သောင်းမက ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတောင်းဆိုမှုတွေကလည်း ၁၉၆၂၊ ၁၉၆၉၊ ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၅၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွေမှာဆိုရင် ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဘဲ တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသား၊ ပြည်သူ များစွာကို ဗိုလ်နေ၀င်းက သူ့ရဲ့စည်းစိမ်များဆုံးရှုံးသွားမည့်အရေးအတွက် အကြောက်
တရားကြီးမားစွာနဲ့မညှာမတာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ဒါကလည်း စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ “ဖေါ်မြူလာ”ခေါ်
“ပုံသေနည်း” ဖြစ်ခဲ့ဒါကတော့ ငြင်းစရာမလိုဘူး ဆိုဒါကတော့၊ အခုလတ်တလော တာတေတို့ရဲ့ တိုင်းပြည်အတွင်း ဗိုလ်သန်းရွှေက ငြိမ်းချမ်းစွာမေတ္တာပို့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြနေတဲ့ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ ပြည်သူများကို ကမ္ဘာသိမြန်မာသိ ကြော်ငြာပြီးတော့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ပြလိုက်ဒါကလည်း စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ Formula ပါ။
ဒါပေမဲ့ဗိုလ်သန်းရွှေကတော့ “နောက်လူကိုသာဆိုး” ဆိုသလိုပါဘဲ ဗိုလ်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်စောမောင်
တို့ထက်စောင်းပြီး Super Formula ကို သုံးပြသွားဒါ ကတော့ “မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်တွေကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း စစ်ဖိနပ်နဲ့ နင်းချေဖျက်စီးပြခြင်း” “ဗုဒ္ဓသာသနာ့အလံတော်ကို ရိုက်ချိုး၊ စုတ်ဖြဲပြလိုက်ခြင်း” တို့ Super Formula ကို ထိတ်လန့်တကြား အကြောက်တရား ကြီးမားစွာ ဒေ၀ဒတ်ထက်အဆပေါင်း များစွာသောမိုက်မဲမှု နဲ့ မိုက်ရိုင်းပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ့အပြင်ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ဓနစည်းစိမ် တွေကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်းပါဘဲ တခြားဟာတွေမကြည့်ပါနဲ့ သမီးတော်အထွေးဆုံးရဲ့ စိန်စီသောည အာဝါဟ၀ိဝါဟ ပွဲကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် အခုတလောကြားရတဲ့ အခြားသောသမီးတော်များကလည်း အထူးသဖြင့် Singapore မှာ ဒေါ်လာသန်း ချီပြီး ရင်းမြှပ်နှံထားတဲ့ Companies များ အများကြီး၊ ဒီလို ဒေါ်လာသန်းထောင်ပေါင်းများစွာကို မတရား ရယူထားတဲ့ ဓနဥစ္စာတို့ ဆုံးရှုံးသွားရမည့်အရေးတို့ကို ဗိုလ်သန်းရွှေအနေဖြင့် တစိမ့်စိမ့်တွေးလေ ကြောက်လေ၊ တရေးနိုးတွေးလည်း ကြောက်လေ ဆိုသလိုပါဘဲ အဲဒီအကြောက်တရားကြီးက ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့အပေါင်းပါ လက်တဆုပ်ကို ဘုရားကို ဘုရားမှန်းမသိ၊ တရားကို တရားမှန်းမသိ၊ သံဃာကို သံဃာမှန်းမသိ လောက်အောင် မောဟအမိုက်မှောင်ကြီး ဖုံးလွှမ်းပြီး သံဃာတော်များကို ရိုက်နှက်၊ သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်၊ ညအချိန်မတော် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကို ၀င်ရောက်စီးနင်း၊ သက်တော်ဝါတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးများပါ မချန်၊ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့ ဦးခေါင်းတော်များကို စစ်ဖိနပ်ဖြင့်နင်း၊ လက်ပြန်ကြိုးတုတ်၊ သွေးစိမ်းရှင်ရှင် မြေခအောင် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးပြီး ၊အတင်းအဓမ္မလူဝတ်လဲစေပြီး ထောင်ထဲအကျဉ်းချ၊ ရဲဘက်အလုပ်ကြမ်းစခန်းများကိုပို့စတဲ့ “ကမ္ဘာ့သာသနာသမိုင်းမှာ အရက်စက်ဆုံး၊ အယုတ်မာဆုံး စော်ကားမှုကြီး” ကို စော်ကားပြလိုက်ပြီး ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ စစ်ဗိုလ်တစုတို့က “ကမ္ဘာ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ” လို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တံဆိပ်ကပ်လိုက်ကြပါတယ်ခင်ဗျား။ အဲဒါကလည်း ဗိုလ်သန်းရွှေတို့လူ့ဗာလတစုကို အကြောက်တရားက အမှောက်အမှားဆီသို့ တွန်းပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(ဒီနေရာမှာ စကားမစပ် တာတေမေး ချင်ဒါကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ဟန်မတူတဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ခပ်တည်တည်လုပ်နေတဲ့ ငတိကို မေးချင်ပါတယ်၊ သူပြောသွားဒါကတော့ “ယခုသံဃာ့
လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ သံဃာအစစ် ၂%သာ ပါဝင်ပါတယ်” လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်၊ ကျန်ဒါတွေကသံဃာ အတုအယောင်တွေသာဖြစ်ပါတယ်လို့ အထင်အရှားပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီလို သံဃာတော်အစစ်တွေ ၂% တွေသာပါဝင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ရင် ရှေးအစဉ်အလာယခင့်ယခင်ကထဲက လူအများကိုးကွယ် ကြည်ညိုဆည်းကပ်ခဲ့တဲ့ အထင်ကရရှိခဲ့တဲ့ “ငွေကြာယံ” ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မြို့နယ်အသီးသီးရှိ စာသင်တိုက်ကြီးများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှာ စာလိုက်စာပေသင်ကြား၊ သီတင်းသုံးတော်မူနေကြတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်များအားလုံးဟာ ရဟန်းတုရဟန်းယောင်များလား?
သိန်းသောင်းချီရှိတဲ့ သံဃာတော်တွေအားလုံးဟာ ရဟန်းတု ရဟန်းယောင်များလား ?
ဒါကြောင့် အခုနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်များကို ၀င်ရောက်စီးနင်းရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ထောင်ချနေဒါလား? ဒါဆိုရင်လည်း ၂% သော ရဟန်းစစ်တွေကရော ဘယ်ကျောင်းဘယ်အရပ် တွေမှာသီတင်းသုံးနေကြပါသလဲ? လို့တာတေကမေးချင်ပါတယ်၊ အဲဒီအခါကျရင်လည်း ၀န်ကြီးဆိုတဲ့ ငနဲကခပ်တည်တည်ဘဲ ကျနော်မသိပါဘူးလို့ ဧကန်မုချလိမ်အုံးမှာဘဲခင်ဗျာ။ အဲဒါကလည်း အကြောက်တရားရဲ့ ခိုင်းစေမှုကြောင့် လိမ်ခြင်းတခုပါဘဲ။)
လောကကြီးမှာ အမှားများများကျူးလွန် ခဲ့သူတွေအဖို့ အမှားများက အတိတ်တစ္ဆေလိုဘဲ အမြဲတမ်း
ခြောက်လှန့်ပြီး အကြောက်တရားများက ပို၍ပို၍ ကြီးတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ သေတဲ့အချိန်အထိ
အကြောက်တရားကြီးမားသွားပုံက သေသူ၏ဆန္ဒအရ နေ့ချင်းပြီးမီးရှို့ပြီးပြာချ နောက်လူဆယ်ယောက်လောက်
နဲ့အသုဘကိစ္စဆောင်ရွက် လိုက်ရပါတယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်းအနေနဲ့ အုတ်ဂူမလုပ်ဝံ့ခဲပါဘူး၊ လုပ်ခဲ့ရင်လည်း သူနှိပ်
စက်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေက သူ့ရဲ့အုတ်ဂူကို တစတမှုံစီ ခြေဖျက်ပစ်လိုက်မှာကိုစိုးရွံ့တဲ့ အကြောက်တရားကသူ
နောက်တယောက်ကတော့ ဗိုလ်စောမောင်ပါ သူလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါဘဲ၊ ၁၉၉၀ခုနှစ်မှာ သံဃာတော်များ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ခဲ့တာကို ဖြိုခွင်းခဲ့ ဒါကတော့ Formula ပါဘဲ၊ ဗိုလ်သန်းရွှေ အခုရက်ရက်စက်စက်ဖြိုခွင်းခဲ့ဒါထက်တော့ မပိုရင်သာရှိမယ်၊လျော့တော့ မလျော့ပါဘူး။
ဒီ့အပြင် ဗိုလ်စောမောင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပညာတ်ချက်လေးပါးဖြစ်တဲ့ ရဟန်းမဖြစ်တော့
တဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်း၊ ဈာန်မရဘဲရခြင်းဟုပြောခြင်းတို့အပြင် ဗိုလ်စောမောင်က ရဟန်းသမဂ္ဂ
သမဂ္ဂီဝင်လျှင် သမုတိသံဃာ အလျင်းမဖြစ်စေရ……..ပုံ စောမောင် ဆိုပြီး အမိန့်၆/၉၀ ကိုထုတ်ပြီး ဘုရားထက်
ပို၍ ပါဝါပိုမြင့်ကြောင်း မတန်မရာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘုရားဂိုဏ်းသံဃာဂိုဏ်း သင့်ပြီး ရူးကြောင်မူးကြောင်နဲ့
အကြောက်တရား ကြီးမားစွာနဲ့ဘဲ အ၀ီစိလားသွားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေက ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အမှန်တရား
တွေကနေပြီ သွေဖီသွားသူတွေ ရဲ့အကြောက်တရားတွေရဲ့ စေ့ဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကြောင့် ရက်စက်ကြမ်း
တာတေတို့နိုင်ငံမှာ ရှေးအစဉ်အဆက်ဆက် ကပြောကြဆိုကြတဲ့စကားတခွန်းကတော့ “ဗမာပြည်မှာငတ်သေတဲ့ မသာမရှိဘူး” တဲ့ အခုတော့ ထမင်းရည်တောင် မသောက်နိုင်လို့ သေခဲ့ရတဲ့မသာတွေရှိနေပါပြီ။ နှစ်နပ်ပေါင်းပြီး တနပ်ထဲသာစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေလည်း သန်းနဲ့ချီနေပါပြီ၊ လယ်စိုက်ရင်း ထမင်းငတ်နေတဲ့ တောသူတောင်သားတွေကလည်း မရေတွက်နိုင်သလို၊ စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ် ရက်စက်မှု့ကြောင့် မစိုက်နိုင်မပျိုးနိုင်နဲ့အိမ်ပစ်ယာပစ်ပြီးထွက်ပြေးနေကြရပြီး အငတ်ဘေးဆိုက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားသွေချင်းတွေ လည်းသန်းနဲ့ချီနေပါပြီ။
အဲဒီအချိန်တွေမှတော့ ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ သားတော် သမီးတော်တွေကတော့ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း ၊ မလေးရှားစတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ နေ့ချင်းပြန် ရှန်ပိန်သောက်ရင်း ညစာတွေပျော်ပျော်ပါးပါး သွားပြီးတော့ စားသောက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ့။ တာတေတို့ရဲ့ ပြည်သူတွေနေရတဲ့ တဲနန်းတော်တွေကတော့ အမိုးမတတ်နိုင်တဲ့ အတွက်ကြယ်မြင်၊ လမြင်ရုံမက စကြာဝဋ္ဌာကြီးတခုလုံးပါ မြင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ဆောင်ကြာမြိုင်တွေကတော့ ဆီးမီးရောင်ဝါထိန်ထိန်လင်းလို့ သိကြားမင်းကတောင် သြချ လောက်ရအောင် နတ်ဘုံနတ်နန်းတွေထက် သာလွန်ပါတယ်။ (နေပြည်တော်မှာက စက္ကန့်မပြတ် မီးလင်းနေလို့ပါခင်ဗျား) တာတေတို့ ပြည်သူတွေဝတ်ရဒါကရော “ဦးပုည” ရဲ့ ရေသည်ပြဇတ်ထဲက ရေသည်လင်မယားရဲ့ အ၀တ်အစားနဲ့သူမသာကိုယ်မသာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေလို တပတ်တခါ နိုင်ငံခြားတွေမှာ Shopping ထွက်ဝယ်တဲ့ အ၀တ်အစားတွေနဲ့ကတော့ နံ့သာဆီနဲ့ အီးဆိုသလိုပါဘဲခင်ဗျား။
ဒါတွေကပြည်သူတွေရဲ့ လက်တွေ့ဘ၀တွေပါ။ ပြောရရင်တော့ ပကတိ အမှန်တရားတွေဘဲပေါ့ဗျာ။
တလောလေးက ဖတ်လိုက်ရတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတန်းစားနှစ်ရပ်ဘဲရှိပါတယ်တဲ့၊ “ဘယ်သူသေသေငတေမာ
ရင်ပြီးရော” ဆိုတဲ့ ဖိနှိပ်တဲ့လူတန်းစားရယ်၊ “သေသော်မှတည့် အော်ကောင်း၏” ဆိုတဲ့ အဖိနှိပ်ခံ လူတန်းစားရယ် နှစ်မျိုးဘဲရှိတယ်၊တနည်းဆိုရရင်တော့ အရင်တုံးက ရန်ကုန်မှာ ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ “Sedona ဆီဒိုးနား လူတန်းစား” နဲ့ ဆီတိုးစားလူတန်းစားနှစ်ရပ် ပါဘဲ။
ပြောစရာရှိဒါတွေကတော့ ပြောမဆုံးနိုင်အောင်ပါ။ ဒါပေမဲ့နောက်မျိုးဆက် လူငယ်တွေသိအောင် ပြော
လက်စနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောရအုံးမယ်ခင်ဗျာ့။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့ ဗိုလ်နေ၀င်းအာဏာမသိမ်းခင်က
တာတေတို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးက အာရှနဲ့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ သယံဇာတ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ အလွန်
ပေါ၊ အလွန်ကြွယ်ဝခဲ့တဲ့နိုင်ငံအဖြစ် အလွန်ကြော်ကြားခဲ့ပြီး Golden Land လို့တင်စားပြီးတောင် ခေါ်ခဲ့ကြတယ်
ခင်ဗျား။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်း အာဏာသိမ်းပြီး ၂၆နှစ်ကြာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကျတော့ တာတေတို့ရဲ့ရွှေနိုင်ငံတော်ကြီးကို
ကမ္ဘာ့ငမွဲနိုင်ငံစာရင်း (L.D.C Lowest Development Country) ၀င်အဖြစ် ဗိုလ်နေ၀င်းက ကျွမ်းကျင်စွာပို့ဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တာတေတို့နိုင်ငံသားတွေ သူဋ္ဌေးသား ကနေပြီး သူတောင်းစားတွေဖြစ်သွားဒါပေ့ါခင်ဗျား။
ပြီးတော့ ၁၉၈၈ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်စောမောင်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေ အထိ
ယခု၂၀၀၇ ခုနှစ်ကျတော့ တာတေတို့ နိုင်ငံသားတွေ သူတောင်းစားအဆင့်တောင်မှ အဆင့်အတန်းရှိရှိတောင်း
မစားနိုင်တော့ပါဘူး၊ ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ တောင်းစားနေရတဲ့ခွက်တောင်မှ ပျောက်သွားခဲ့ရပြီခင်ဗျား။
ဒါကြောင့်လည်း အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေထဲမှ ဓနအင်အားကိုဘဲတန်းစီစီ၊ အသိအတတ်ပညာ ပိုင်းကိုဘဲတန်းစီစီ တာတေ တို့ရဲ့သာကီမျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာတွေက အခုတော့ နောက်ဆုံးမှာ၊ အောက်ဆုံးမှာရောက်နေ ဒါကို ရင်ထဲနင့်နင့် နဲ့ဝမ်းနည်းစွာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အဖြစ်ကလည်း “သေသော် မှတည့်အော် ကောင်း၏” လို့ ပြည်သူတွေကြွေးကြော်နေကြရတယ်လို့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လွန်အံ့မထင် ပါကြောင်းပါခင်ဗျား။
တာတေတို့ရဲ့နိုင်ငံသားအများစု လယ်ကွင်းပေါ်မှာ ခွထိုင်ပြီးတော့ ထမင်းရည်တောင်ခွဲတမ်းနဲ့သောက်
နေကြရပါပြီ၊အဲဒီလို ဆင်းရဲတွင်းနက်ခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ဘ၀တွေဟာ အသက်ရှင်လျက်နဲ့ သေနေကြရ
တဲ့ ဘ၀တွေအဖြစ်ခံစားလာခဲ့ကြရ ဒါတွေက စစ်အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့ သက်တမ်းနဲ့အမျှပါ၊ အဲဒီခံစားမှုတွေရဲ့ ရေ
ချိန်တွေမြင့်လာတော့လည်း ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ဘ၀ဟာ “သေမထူးဘ၀” တွေအဖြစ် ခံစားလာကြရဒါလည်း ဖြစ်စဉ်တခုပါ၊ ဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ်ဆိုဒါလည်း သဘာဝတရားပါ။ ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲ့ တိုက်တွန်းမှုမှကြောင့်လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်အဖျက်သမားကလည်း ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းစည်းခံခဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပါ။ ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ ဘ၀ပေးခံစားချက်ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့သေမထူးဖြစ်လာဒါရတဲ့ဘ၀ပါ။
သေရမှာကိုတောင်မကြောက်ခဲ့ရင်တော့ “အကြောက်တရားဆိုဒါ ဂျိုနဲ့လား?” လို့မေးရတော့မှာပေါ့ဗျာ၊
ဒါကြောင့် သေရမှာတောင်မကြာက်တော့ပါဘူးဆိုမှဖြင့် လောကကြီးမှာ ဘာကိုနောက်ထပ် ကြောက်စရာလိုသေး
သလဲဗျာ၊ ဒါကြောင့်လည်းအကြောက်တရား မရှိတော့တဲ့ တာတေတို့ရဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးက အမှန်တရားရှာလာ
တယ်ဆိုဒါကတော့ နိယာမပါ။ အဲဒါကလည်းဘာလဲလို့ဆိုတော့ “လူက လူလို ပီပီသသ စား၊ ၀တ်၊ နေရေး” ပါဘဲ။
ဒါကြောင့်လည်း သံဃာတော်များ ဦးဆောင်ပြီး ကျောင်းသားပြည်သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုက လူလိုထိုက်ထိုက်တန်တန် ချောင်ချောင်ချိချိနေ ထိုင်စားသောက်နိုင်ရေးအတွက်၊ စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းသတ်ဖြတ်မည့်အရေးကိုမမှုဘဲ သတ္တိရှိရှိ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မိမိတို့အရေးအတွက် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် အသက်သွေးများ ပေးဆပ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်တို့ကို တောင်းဆိုခဲ့သည့် “စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး လှိုင်းကြီး” ကသက်သေပြခဲ့ပြီလေ။
မြန်မာ့ပြည်က ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသား ပြည်သူအပေါင်းရဲ့အကြောက်တရားကင်းပြီး ရဲဝံ့သတ္တိကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူအပေါင်းကလည်း လေးစားစွာ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီ၊ စာနာမှုတွေပေးခဲ့ပြီ၊ ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီ၊ တာတေတို့ရဲ့ အဖိနှိပ်ခံပြည်သူတို့နဲ့ တသားထည်း ညီညွတ်နေကြပြီးဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကလည်း ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသား၊ပြည်သူတို့ရဲ့ အကြောက်တရားကင်းပြီး အမှန်တရားကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်တိုက်ယူခဲ့ရတဲ့ “ဓမ္မတိုက်ပွဲကြီး” ရဲ့အသီးအပွင့်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံက နပိုလီယမ် ပြောခဲ့ဘူးပါတယ် “နိုင်ငံသားတိုင်းသည် မိမိနှင့်ထိုက်တန်သောအစိုးရကိုသာ ရစမြဲဖြစ်တယ်” ဒီစကားအရ ၄၅နှစ်ကျော် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် တာတေတို့ပြည်သူတွေ မျက်စိပိတ်၊ နားပိတ်၊ ပါးစပ်ပိတ်နဲ့ အကြောက်တရားကြီးမားစွာနဲ့နေခဲ့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အဆက်ပြတ်ပြီး အမှောင်ကမ္ဘာ ကျောက်ခေတ်ထဲမှာ ပိတ်ခံနေခဲ့ရပါတယ်။
ဒီ့အတွက်ကြောင့်လည်း အသိဥာဏ်မရှိ၊ ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိ၊ ကိုယ့်လူမျိုးကိုသာ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းသတ်ဖြတ်မှုကိုသာ နားလည်တဲ့၊ ခပ်ညံ့ညံ့စစ်အာဏာရှင်တို့က သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် တာတေတို့ပြည်သူတွေ သူတောင်းစားခွက်ပျောက်တဲ့ကိန်းဆိုက်ခဲ့ရတယ်။
အခုခေတ်အချိန်ခါ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုမှာ နည်းပညာတွေတိုးတက်မှုကြောင့် စစ်အစိုးရ က ပြည်သူတွေကို အမှောင်ချထားရတဲ့ ခေတ်ကုန်ပါပြီ၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့စက္ကန့်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း သတင်းတွေ နည်းပညာတွေ ပေါက်ကွဲနေတဲ့အခါမို့လည်း တာတေတို့ရဲ့ပြည်သူတွေ အသိရေချိန်တွေ မြင်မားလာသလို၊ နိုင်ငံရေးအသိရေချိန်တွေလည်း မြင့်မားလာကြတဲ့အတွက် အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း ရှု့မြင်သုံးသပ်နိုင်ကြပြီး ရဲရင့် တဲ့ ပြည်သူတွေဖြစ်လာကြတဲ့အတွက် ခပ်ညံ့ညံ့ စစ်အစိုးရ၊ လူသတ်တဲ့ စစ်အစိုးရကို အလိုမရှိကြတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ရဲရင့်တဲ့ပြည်သူတွေက သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အသိဥဏ်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့၊ ရဲရင့်တဲ့အစိုးရတရပ်ကို မရမချင်း၊ စစ်အစိုးရရဲ့ မည်သည့်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုမျိုးကို ဂရုမစိုက်ဘဲ အကြောက်တရားကင်းရှင်းစွာနဲ့ အမှန်တရားကို လက်ကိုင်ပြုပြီး ……..
“ဒီမိုကရေစီ” ရရှိသည်အထိ “ဓမ္မတိုက်ပွဲကြီး” ကို ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ၀င်မယ်လို့ …….. တာတေက မမှိတ်မသုန်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ရေးသင့်တာရေးတဲ့ တာတေ at 6:39 AM0ယောက် အကြံပြုသွားတယ်
“ဦးတော်” “ဦးတော်” ဟေ့။
ဗိုလ်သန်းရွှေ က ညွှန်ကြားဒါ
“ရိုက်ကြ” “ရိုက်ကြ” ဟေ့ ။
ရေးသင့်တာရေးတဲ့ တာတေ at 6:52 AM0ယောက် အကြံပြုသွားတယ်
သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
“ လူ့အရေး” ကို
အခုအချိန်ထိ စာသင်ပေးနေတဲ့ တာတေ။
“ ဥပဒေမရှိတဲ့တိုင်းပြည်” ထဲမှာ
အမှန်တရားအတွက် အကျိုးဆောင်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ တာတေ။
ရေးချင်တာများရှိရင် ရေးခဲ့ပါ ...
တာတေရေးတဲ့ပို့စ်တွေကို အများအကျိုးအတွက်ဆိုရင် လွတ်လပ်စွာကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။